ဘုရားတကယ်ရှိပါသည်။ | အမေးများအတွက် အဖြေလွှာ
ဘုရားတကယ်ရှိပါသည်။	December 10, 2009
2 Responses to “ဘုရားတကယ်ရှိပါသည်။”
it’s me, Nwe Ni…..it’s really good that you can write on the website. keep going on….
ဟုတ်ပါတယ်… ကျနော်လည်း ကျနော့်အကြောင်းတစ်ခု သက်သေခံချင်ပါတယ်…
နှစ် အတိအကျတော့ မမှတ်မိတော့ပါ…. ကိုးတန်းဖြေပြီးတဲ့နှစ်လောက်မှာပါ…
ညနေခင်းတစ်ခုမှာပေါ့… ကျနော့်မှာ နာရီ မရှိဘူး… နာရီတစ်လုံးလောက်တော့ လိုချင်တယ် ဆိုပြီး ကျနော် ဒူးထောက် ဆုတောင်းတယ်..
မျက်ရည်ကျတဲ့အထိ ဆုတောင်းတယ်… … ဆုတောင်းပြီး လည်း ပြီးရော… ချက်ချင်း အမ တစ်ယောက် (အဒေါ်အကြီးဆုံးရဲ့ သမီး) က လာခေါ်တယ်… အောက်အိမ် (အဒေါ်အလတ်တို့အိမ်) သွားလည်မယ်တဲ့ … ကျနော်လည်း လိုက်သွားရောပေါ့… ။
ဟိုကိုလည်း ရောက်ရော .. ကျနော့်အကိုငယ် (အဒေါ်အလတ်ရဲ့သား အငယ်ဆုံး) က မင်းကလည်း ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီး နာရီတစ်လုံးတောင် မရှိဘူးလား… ရော့ရော့ .. ငါ့ဟာယူလိုက်ဆိုပြီး . သူ့ရဲ့ ပတ်ထားတဲ့ အသစ်စက်စက် နာရီကို ကျနော့်ကို ပေးလိုက်တာ.. ကျနော်ဆို ပျော်လွန်းလို့ .. အခုလို ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ ဘုရားသခင်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်လို့ မဆုံးဘူး…
… ဒါတွေတင်မကဘူးဗျ…. နောက်ပိုင်းမှာလည်း တစ်ခုခု ဖြစ်ပြီဆို ဥပမာ ဖျားတာ နာတာက အစ ဆုတောင်း ခဏနေဆို ပျောက်ကို ပျောက်တာ … တစ်ခါ နှစ်ခါ မကတော့ပါဘူး… ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းလို့ကို မဆုံးပါဘူး….